Dharka ugu sareeya | November 2019
Ugu Weyn Ee Dharka ugu sareeya
Faahfaahin buuxda oo ku saabsan dabeecadaha warshadani waxay isku dhafan yihiin is-khilaafyo badan. Qoyskan waxaa ku jira xayawaan badan oo hooseeya. Nooca Wood iyo lianovidny. Iyadoo miraha dhadhan fiican leh ama hababka qurxinta. In ka badan 200 nooc oo warshadaan ah ayaa loo yaqaan. Honeysuckle Decorative: noocyada iyo noocyada Honeysuckle waxaa laga helaa noocyo leh qaab muuqaal ah.
Rhubarb, xeerarka koritaanka iyo goosashada
Rhubarb waa geedo digaag ah oo ka mid ah qoyska buckwheat, oo leh rhizome xoog leh iyo caleemo ballaaran, oo ku yaalla dheriga iyo dheer petioles. Petioles waxay ku koraan ilaa 80 cm oo dherer ah ilaa 4 cm oo weyn, miisaankoodu wuxuu gaari karaa ilaa 1 kg. Qodobkani waxaan ka hadli doonaa sharciyada koritaanka iyo qashinka.
Ma suurtogal in la koro guriga, iyo sida loo sameeyo
Lavender (latandula) - wakiil ka mid ah caleemaha dhirta qoyska yasnotkovyh (Lamiaceae ama Labiatae). Magaca ayaa ka yimid Giriigga. "Lava", oo macneheedu yahay "maydhin", waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Giriiggii hore, lavender lagu darey waaskada. Botanistu waxay qarsadaan 47 nooc oo dhirtaas ah. Cabbirku wuxuu ka yimid Mediterranean.
Noocyada Clematis Care: Wax walba oo ku saabsan Quudinta iyo Biyaha Cagaarka
Clematis, clematis, canabkiinna - sida ugu dhakhsaha badan ma ay u wacaan this ubax qurux badan. Waxaad la kulmi kartaa, laga yaabee, geeska adduunka. Waqtigan xaadirka ah, saynisyahannadu waxay soo saareen in ka badan 300 nooc oo dhirta ah - laga bilaabo qurxinta, baalkoosku wuxuu soo bandhigi karaa qulqulo, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu qurxiyo derbiyada, gaaska iyo waxyaabo kale.
Waa maxay qiyamka: halabuurka, noocyada, codsiga
Bacriminta, sida potassium iyo humate sodium, waxay muddo dheer noqdaan dhaymo caan ah. Way fududahay in la isticmaalo, laakiin waqti isku mid ah ayaa wax ku ool ah. Humat - waa maxay waxa aynu kudoonayno in aynu ku fekero in aynu si fiican u nasiino oo aan u qeexno waxa uu yahay. Humat waa koox weyn oo daroogo ah, waxaa laga sameeyey cusbada asiidhka humic, kuwaas oo si fudud loo foori karo.
Maanta, dukaamada dukaamada beeraha waxaa ka buuxa cuntooyin warshadeed kala duwan. Laakiin mid ka mid ah hadafyada ugu muhiimsan ee bannaanka u yihiin faa'iidooyinka iyo dabiiciga ah ee dalagga beeraha. Meelaha ay bixiyaan dukaamada ma ahan kuwo marwalba faa'iido leh. Waxaa jira mid aad u fiican, iyo ugu muhiimsan oo qaali ah, bacriminta beddelka ah - bacriminta nettle for dhirta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dharka ugu sareeya 2019